ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်သို့ Harvard, Fletcher နှင့် MIT တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲလွန်ကျောင်းသားများလာရောက် | UMFCCI
ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်သို့ Harvard, Fletcher နှင့် MIT တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲလွန်ကျောင်းသားများလာရောက်
Written by UMFCCI Administrator // June 28, 2014 // Gallery, UMFCCI News
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Center for Asia Leadership Initiatives မှ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Samuel Hungsoo Kim ဦးဆောင်သည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Harvard တက္ကသိုလ်၊ Feltcher တက္ကသိုလ်နှင့် Mansachusettee Institute of Technology (MIT) တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းသား (၄၀)ဦးပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်သို့ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသည်။
ယင်းတွေ့ဆုံပွဲသို့ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းအောင်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာမောင် မောင်လေး၊ ဦးသိန်းဟန်၊ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များဖြစ်ကြသော ဦးသောင်းစုငြိမ်း၊ ဒေါ်သင်းသင်းဆက်၊ ဦးထင်အောင်ခိုင်၊ ဒေါ်အိနှင်းပွင့်တို့ တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။
ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ဒေါ်သင်းသင်းဆက်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ မျက်မှောက်စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် “Myanmar AtaGlance” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဧည့်သည်များကို ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဧည့်သည်တော်များက ၄င်းကသိရှိလိုသည့် ကဏ္ဍများဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မီဒီယာလုပ်ငန်းတိုးတက် လာမှုအခြေအနေ၊ အင်တာနက်နှင့် Social Media မှ မြန်မာ့ စီးပွားရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်ဏ္ဍ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည့် အလားအလာကောင်းများနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တိုးတက်ရေးအတွက် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်မှ ဆောင်ရွက်နေမှုများ စသည်တို့ကို မေးမြန်းခဲ့ရာ တက်ရောက်လာကြသည့် ဗဟိုအလုပ်ဆောင် အလုပ်အမှုဆောင်များက မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တက္ကသိုလ်ကြီး (၃)ခုမှ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများသည် Asia Leadership Trek အစီအစဉ်ဖြင့် အာရှ (၆) နိုင်ငံဖြစ်သည့် တိုကျို၊ ဆိုလ်း၊ ဘေဂျင်း၊ ရန်ကုန်၊ ဘန်ကောက်၊ ဂျာကာတာသို့ လေ့လာရေး ခရီးလာရောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအာရှ (၆)နိုင်ငံမှ အစိုးရ၊ စီးပွားရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတို့မှ ခေါင်းဆောင်များဖြင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို သိရှိနားလည်စေရန် ရည်ရွယ်သည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.
View all posts by UMFCCI Administrator